Magnetik njikọ - China Ningbo enweghị
Magnetik njikọ ------- adịgide nju Assembly A magnetik njikọ na tumadi ekewet nke ihe elu rotor, ihe dị n'ime rotor na ihe na-akpa iche uwe. Na-adịgide adịgide magnet agba na-anya ndokwa tinyere circumferential direction nke dị n'ime rotor, nke Nleta a magnetik push-esiri ike circuit. The magnetik njikọ enyefe torque si otu aro iji na-adịgide adịgide ndọta. Ọ na ejikọ praịm moto na-arụ ọrụ igwe nanị magnetik ike. Otú ahụ ...
------ - adịgide Adịgide nju Assembly
A magnetik njikọ na tumadi ekewet nke ihe elu rotor, ihe dị n'ime rotor na ihe na-akpa iche uwe. Na-adịgide adịgide magnet agba na-anya ndokwa tinyere circumferential direction nke dị n'ime rotor, nke Nleta a magnetik push-esiri ike circuit. The magnetik njikọ enyefe torque si otu aro iji na-adịgide adịgide ndọta. Ọ na ejikọ praịm moto na-arụ ọrụ igwe nanị magnetik ike. Ndị dị otú ahụ nkịtị n'ibu njikọ adịghị abuana kpọmkwem n'ibu njikọ, ma dabere na na ndọta na mmekọrịta dị n'etiti nju n'ime.
Magnetik couplings na-ọtụtụ-eji ọrụ na-agụnye: mmiri ụlọ ọrụ, nsị ọgwụgwọ, mmanụ ala na eke gas, thermal ike ọgbọ, Central ntụ oyi usoro maka na friji na kpo oku, akwụkwọ na pulp, ugbo mmiri, coal, ciment, nkà mmụta banyere ígwè, chemical, shipbuilding na na na.
Main Magnetik Materials maka magnetik njikọs
Ferrite ihe onwunwe, na ya uru nke mbara akụrụngwa isi iyi na ọnụ ala price, e popularly eji na magnetik couplings na mmalite. Ma, ya na-adịghị ike ndọta sụgharịrị dịtụ obere torque, nke oke ya ngwa.
SmCo na alnico, na ike ndọta ihe karịa ferrite nju na magburu onwe-eguzogide megide corrosion na elu okpomọkụ, bụ abụọ ezigbo magnetik ihe maka couplings. Otú ọ dị, e nwekwara a dị ịrịba ama emezighị emezi nke SmCo na Alnico ihe onwunwe: elu akụrụngwa price.
The na-agaghị emeli nke ferrite, SmCo na alnico ihe enwekwukwa mmepe nke ọgbọ nke atọ na-adịgide adịgide magnet ihe: neodymium aak nju NdFeB nju bụ ugbu a na ike nju na bh (Max) ruo 52 MGOe na ikwu ala price tụnyere SmCo na alnico nju. Neodymium magnet dịkwa mfe ebipụ na akuakuzinwo, na-enyere ha na-arụpụtara n'ime obere nha, nke na-enye aka maka mbenata olu nke couplings.
Na uru nke kasị elu magnetik ike, dịtụ ala price na mgbanwe nke nha, neodymium magnet na-kasị n'ọtụtụ ebe na magnetik ihe na couplings.
Previous: nyagide nju
Osote: magnetik mkpado akwụkwọ